फिलिपिन्समा पुन: भूकम्पको धक्का, ११ जनाको मृत्यु र २४ जना बेपत्ता – EngineerKhabar
By इन्जिनियरखबर	 Last updated Apr 23, 2019 0
A church worker walks past rubble of the 18th century St. Catherine of Alexandria after its bell tower was destroyed followinga6.3 magnitude earthquake that struck the town of Porac, pampanga province on April 23, 2019. - Philippine rescuers were scrambling April 23 to reach dozens of people feared buried underabuilding near Manila that collapsedaday earlier inapowerful earthquake, as the death toll climbed to 11. (Photo by TED ALJIBE / AFP)
फिलिपिन्सको समार नामक प्रान्तमा मंगलवार मध्याह्नमा पुनः ६ दशमदब २ म्याग्नीच्यूडको शक्तिशाली भूकम्प गएको त्यहाँको भौगर्भिक केन्द्रले जनाएको छ ।
भूकम्पको केन्द्र पूर्वी समार प्रान्तको सान जुलियानबाट करिब १९ किलोमिटर उत्तरतर्फ जमिनको सतहबाट करिब १७ किलोमिटर मुनि रहेको केन्द्रले जनाएको छ । भूकम्पको धक्का फिलिपिन्सको राजधानी मनिलासहित मध्य फिलिपिन्सका धेरै प्रान्तमा अनुभव गरिएको थियो ।
सोमबार गएको भूकम्पबाट मारिने व्यक्तिको संख्या ११ पुगेको छ भने २४ जना हराइरहेको फिलिपिनी अधिकारीहरुले बताएका छन् । ठूलो जनधनको क्षति गरेको उक्त भूकम्पबाट भएको मानवीय क्षति अझ बढ्न सक्ने अनुमान लगाइएको छ ।उक्त शहरमा सुरक्षाकर्मी एवं स्थानीय व्यक्तिहरुले रातभर उद्धारका काम गरेका छन् । भूकम्पको परकम्प ४ सय पटकभन्दा बढी अनुभव गरिएको छ ।
राजधानी मनिलाको उत्तरी प्रान्त पाम्पान्गाको पोराक शहरमा भवनहरु र अरु संरचना भत्किएका छन् ।
उक्त भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण प्राप्त भइसकेको छैन ।